I-Sandals Eva Foam Printer China Manufacturer
Incazelo:Ividiyo ye-Eva Foam iphrinta,I-Eva Foam Printer Youtube,I-Sandals Eva Foam Printer Amazon
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-Foam Foam > I-Sandals Eva Foam Printer
Imishini yokunyathelisa e- RFC ehlukahlukene eyenziwe nge- A3 eye yamukelwa ubuchwepheshe obuhlakaniphile nobuchwep ukudweba phezu kwayo yonke indawo ephepheni ngaphandle kwesandla. I-RFC iba ngowokuqala ukusebenzisa lolu buchwepheshe, futhi inezinombolo zamalungelo obunikazi bomthetho kazwelonke. I-RFC imakethe yasemaphandleni ihlanganisa iSpain, Iran, Pakistan, i-United Arab Emirates, i-United States namanye amazwe. I-RFC yokuphrinta okuningi yama-machien inegama elihle emhlabeni.
I-Sandals Eva Foam iphrinta uhlobo oluthile lokungena othintana nohlobo lwe-jet uhlobo lwe-digital, i- Eva Foam Printer Video uhlelo lokusebenza lukhulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo ze- Eva Foam Printer yethu ye-Youtube RF-A3UV:
2. Ama- Sandals Eva Foam Printer Amazon ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
I-Eva Foam Printer Walmart Okuhle kakhulu: I-CISS ngaphandle kwenkinobho ye-ink + okushicilelwa kokushicilela okuphumayo + umphumela omuhle + womsebenzisi-friendly
Ividiyo ye-Eva Foam iphrinta I-Eva Foam Printer Youtube I-Sandals Eva Foam Printer Amazon Isevisi ye-Sandal Eva Foam yephrinta Izindawo ze-Eva Foam Printer Imisebenzi ye-Eva Foam Printer I-Sandals Eva Foam iphrinta Ink Ividiyo ye-UV Flatbed Printer